Uvimba weZiphumo zoMdlalo wamanqindi -Iwebhusayithi yeBhokisi yeNombolo ye-1 yaseYurophu
UJack Massey yintshatsheli entsha ye-International Boxing Organisation (IBO) World Cruiserweight emva kokudiliza UBilal Laggoune kwimijikelo emithathu kowona msebenzi ubalaseleyo kwiHotele egcwele iBolton Whites nge-26 kaNovemba.
UMassey wayethembise ukumiswa komjikelo weshumi kodwa wakwazi ukwenza umsebenzi wenziwe kwangethuba emva kokuba ebethe ikhonkco lasekhohlo kwisilevu somchasi wakhe waseBelgian, emva koko wafaka uxinzelelo lokunyanzela usompempe ukuba angenelele kwaye aphelise inkqubo kuvuyo lwesihlwele esinomkhuhlane. .
U-Bilal uze e-UK njengendoda enamava ngakumbi ephulukene nje kabini kwimidlalo engama-29 kodwa akazange anikwe thuba lokungena emlo.
UMassey, osuka eMarple, ubethe amanqindi ngomonde kwintsimbi yokuqala ngokuchasene nowayesakuba ngumceli mngeni kwiTitle yaseYurophu ngaphambi kokuba abonise amandla odidi lwehlabathi ukuba abe kuphela kwendoda yokunqanda imbangi yakhe, kwaye ibango lewonga lehlabathi kule nkqubo.
Ngoku i-19-1, kunye ne-10 KOs, isitokhwe sikaMassey siye sadlula ephahleni kwaye umntu oneminyaka engama-28 ubudala unokukhangela phambili kwi-2022 ethembisa ukukhuselwa kwesihloko, ukudibanisa ukudibanisa, okanye mhlawumbi zombini.
UJeffers wanikwa umthambo onesidima ngomnye undwendwe lwaseBelgium, UMichel Garcia, phambi kokubanga ibhanti leWorld Boxing Organisation (WBO) Global Super-Middleweight. UGarcia wayephulukene nenye kuphela kwi-16 ngaphambi kokhuphiswano kodwa nangona ejongeka 'enyameni' esikalini wangqina ukuba inkangeleko iyakhohlisa. UMark – indoda ende – ibingumntu ohlasimlis’ umzimba kumlo wemijikelo elishumi, kwaye ekugqibeleni wafumana impumelelo ebanzi neqinisekileyo – ephumelela umjikelo ngamnye kumakhadi amabini eejaji – kodwa akakwazanga ukugqiba ukhuphiswano kwangoko. UGarcia wabonakala engumntu okwaziyo ukulinda kunye nomdlalo njengoko wayeqinisa imijikelo, kunye noJeffers ongabethwa uChorley mhlawumbi wafunda ngakumbi kulo mlo kunakwi-13 yakhe yangaphambili.
UCollins – ekhusela intshinga yakhe yokuqala kudidi lweCommonwealth Featherweight – kuqikelelwe ukuba uza kuba nzulu kumdlalo woMzantsi Afrika. UThembani Mbangatha, owafika e-UK engabethwanga kwi-11 kunye nee-KO ezintlanu. Enyanisweni, nangona kunjalo, i-Scot nangona wayesebenzisana nomchasi wakhe ngokulula, ebonisa iklasi ukuba i-stellar amateur career yakhe yayithembisile ngaphambili. UMbangatha ebekwimo entle kwaye ebenempumelelo, kodwa akazange akwazi ukumelana nezakhono zobukrelekrele zikaCollins, othe wahlalisa umntu wakhe kwindawo yesibhozo phambi kokuba agqibe imicimbi ngeyethoba kwishumi elinesibini. UNathaniel uhlala engoyiswanga kwii-KO ezisithoba - ezine - kwaye ujonge italente ekhethekileyo.
Uluhlu lweminyhadala yamanqindi esiza kuyigubungela bukhoma kunye nekhadi elibonisa ukuba alikho semthethweni (umsitho ophambili), cofa le khonkco ilandelayo > Iziphumo zeBhokisi eZiphilayo kunye noMnyhadala
UFlorian Marku woyisa uJorick Luisetto eWembley - ingxelo kunye negalari
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	IBHOKISI, UFlorian Marku, Jorick Luisetto, UMarku vs. Luisetto, Indawo ye-SSE, Inkosi yaseAlbania, Wembley	0
UFlorian Marku vs. Jorick Luisetto
I-SSE Arena, eWembley, eNgilani-nge-20 kaNovemba ka-2021
UFlorian Markku wandise irekhodi lakhe lokungabethwa phambi kwamawakawaka abantu base-Albania, efumana impumelelo ekufutshane evala uJorick Luisetto ngaphezulu kwemijikelo esibhozo.
Abalandeli bakhe beqela benza udonga lwengxolo njengoko indoda yabo yenza indlela eya kwindandatho kwaye emva koko bavuya ngayo yonke intshukumo yakhe ngokulinganayo.
Ukuqala kumzantsi wepaw kodwa etshintsha ngokuthanda kwakhe, uMarku ubonakalise ukuguquguquka kunye nobuqhetseba, egxininiswe luchungechunge olukrelekrele lwe-uppercut ethe yahlala ngaphezulu kwesinye.
Umdlalo uLuisetto wayengezanga eLondon ukuza kuqengqeleka kwaye wayebonakala echukunyiswe kukwamkelwa kobutshaba kwisihlwele.
Wanika uMarku iingxaki ezininzi kunokuba 'uKumkani waseAlbania' mhlawumbi wayelindele, kodwa njengoko umlo wawuqengqeleka kuMarku wayenamandla olawulo kwaye ngowesihlanu waziva ekhululekile ukuba abonise isikebhe.
Asizange siphumelele isiAlbania kodwa kungekhona ngenxa yokuzama; wanika abalandeli bakhe oko bebeze kukubona kwaye baya kuvuka ngokulinganayo ukuze balandele inyathelo elilandelayo lohambo lwakhe xa ebuyela kwi-BOXXER ring ngo-2022.
(IIMFOTO: BOXXER / LAWRENCE LUSTIG)
UTerence Crawford umisa uShawn Porter – uCrawford useyinkosi yodidi lwewelterweight
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	ICrawford vs. iPorter, UShawn Porter, UTerence Crawford	0
UTerence Crawford vs Shawn Porter
I-Michelob ULTRA Arena eMandalay Bay eLas Vegas, eU.SA-20 Novemba 2021
Ukumkani weponti ngeponti waphawula uloyiso lwakhe oluchaza umsebenzi wakhe. UTerence "Bud" Crawford wakhupha "ixesha lokubonisa" uShawn Porter kwinqanaba le-10 ukuze agcine isihloko sakhe se-WBO welterweight phambi kwesihlwele esithengisiweyo se-11,568 eMichelob ULTRA Arena eMandalay Bay eLas Vegas.
UCrawford (38-0, 29 KOs) wenza ukhuselo lwesihlanu lwesihloko asiphumeleleyo ngoJuni 2018 kwaye wanikwa olona vavanyo lunzima lomsebenzi wakhe obalaseleyo. Porter (31-4-1, 17 KOs), olwe yonke i-elite welterweight yeli xesha, wenza izinto zingakhululeki ngaphakathi.
“(Ndimcingele) uMjikelo woku-1,” utshilo uCrawford. "Ndiye ndacinga ukuba ndinako ukufikelela kwaye kufuneka athathe amathuba, kwaye wenza into aqhele ukuyenza. Wazama ukundimol wandibuyisela umva, kodwa ndasebenzisa i-engile zam kwaye ndandimbuyisela umva ngamanye amaxesha. UShawn Porter ngumlo okrelekrele. Wayesenza ezinye izinto apho kwaye wandenza ndacinga.
"Ndiyamthanda. UShawn Porter ngumhlobo wam wokwenyani. Ndandingafuni nyani ukulwa naye. Besihlala sisithi sizakulwa xa ixesha livuma kwaye ndiyaqikelela ukuba lixesha elifanelekileyo lokuba lo mlo wenzeke. Ndizamile ukulwa nezinye iintshatsheli zeli candelo, kwaye ayizange yenzeke loo nto, ndiye ndaya kweyona nto iphambili.”
UPorter ukhokele i-48-47 kuwo onke amanqaku amanqaku emva kwemijikelo emihlanu, kodwa uCrawford wathatha ulawulo kwisiqingatha sesibini somlo. Emva komjikelo obalaseleyo wesithoba, uCrawford wafumana amanqaku amabini, kwaye umqeqeshi kunye noyise kaPorter, uKenny Porter, wawumisa umlo.
Ixesha lam beliphelile kwaye ebengandivumeli ukuba ndifumane isingqi sam,” utshilo uPorter. “Ungoyena mntu ubalaseleyo kubo bonke endikhe ndahlala naye eringini.
Kwinkomfa yabezindaba emva kokulwa, uPorter wachaza umhlalaphantsi wakhe. Ikamva likaCrawford, okwangoku, liza kubonakala.
“Ungoyena mntu ubalaseleyo kubo bonke abantu endikhe ndahlala naye eringini, Laa ndoda indibethe ngaphezu kwakhe nabani na endakha ndahlala naye eringini,” utshilo uPorter.
UArnold Gonzalez woyisa uJose Luis Prieto - izihloko ze-UBO zengingqi e-Ecuador
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	Arnold Gonzalez, Ibhokisi eyinkunzi, Ecuador TV, UGonzalez vs. Prieto, Jose Luis Prieto, UBO, Umbutho waManqindi kwindalo iphela	0
UArnold Gonzalez vs. Jose Luis Prieto
Manta, Ecuador – 20 Novemba 2021
Izihloko ze-UBO Inter-Continental & South America
U-Arnold Gonzalez ubeke umgca oshinyeneyo phantsi kwesakhono sakhe, xa wayephumelele intshinga ye-Universal Boxing Organisation™ (UBO) ye-Inter-Continental kunye neyoMzantsi Melika ngobusuku bangoMgqibelo, Novemba 20, kwisixeko saseManta kwilizwe lakowabo i-Ecuador.
I-Ecuadorian-American eneminyaka eyi-26 ubudala, ilawulwa ngokuchukumisayo kwaye yamisa i-WBC yangaphambili i-titlist yengingqi uJose Luis "El Tigre" Prieto kwimijikelo emihlanu, kwisiganeko esiphambili somboniso okhuthazwa yiBhokisi leNkunzi kwi-Coliseo Tohali.
UGonzalez waqala umlo ebeka amandla akhe, enyanzela uPrieto kunyawo lwangasemva. Wafaka ibhokisi entle ukuze avule umdlali wakhe, edibanisa amanqindi ayingozi emzimbeni nasentloko, ngelixa uPrieto wayesebenzisa amava akhe, evimba uninzi lwezithonga kwaye ezama ukunqanda iintambo.
Imijikelo emine idlule kuninzi olufanayo, uGonzalez uya phambili kwaye uPrieto uhlala ezikhusela kodwa eyingozi kwi-spurts. Kodwa xa umjikelo wesihlanu wawuza kuqala, uPrieto wabanga ukonzakala kwaye ngokuphoxayo warhoxa kwisitulo sakhe.
Ukuphumelela izihloko zakhe zokuqala zobuchwephesha, uGonzalez waphucula irekhodi lakhe elingenasiphako kwi-9-0 (5).
UPrieto, othe ekuqaleni kwalo nyaka wabonisa ukuba usenento anokuyinika xa ebetha owayesakuba yintshatsheli yaseColombia uYuri Mendez, wehla waya ku-28-11 (18).
Lo mlo wasasazwa kuzwelonke kumabonakude wase-Ecuador, nakumazwe ngamazwe ngoFacebook.
Idabi likaBarrera kunye noDe Leon ukuya kumgama kumboniso - iziphumo zamanqindi
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	Abel Mendoza, UAlejandro Moreno, Ingelosi Chavez, Anthony Hill, Avoran Graham, Barrera vs. Ponce de León, Brandon Lira, Clinton Chavez, UDaniel Arriaga, UDaniel Ponce De Leon, UJohn Herrera, UJohnny Tapia, UJonathan Rice, UJosh Holguin, Luis Angel Ledesma, UMarco Antonio Barrera, UMichael sanchez, UVictor Zaleta, Xavier Madrid	0
UMarco Antonio Barrera vs. Daniel Ponce de Leon
Inn yeMountain Gods Resort & Casino eMescalero, eNew Mexico-20 Novemba 2021
Amagqala amabini embethi manqindi aseMexico anxibe iiglavu zawo okokugqibela ngobusuku bangoMgqibelo njengoko iHolo yeFamer uMarco Antonio Barrera kunye nowayesakuba yintshatsheli yehlabathi yamaxesha amabini uDaniel Ponce de Leon balwela umgama kumboniso owonwabisayo, onemijikelo emithandathu kudidi oluphakathi uhlala eFITE kwaye Golden Boy Fight Night on Facebook Bukela Ihlawulwe Online pay-per-imbono evela Inn of the Mountain Gods Resort & Casino e Mescalero, New Mexico.
Barrera (67-7, 44 KOs) wabuyela umsesane kuphela okwesibini kwisithuba esingaphezu kweminyaka elishumi Tapia Promotions '“La Ultima Batalla” (The Last Stand), ngoxa iqabane lakhe De Leon (45-7, 35 KOs ) wenze ukubonakala kwesangqa sakhe sokuqala esisikweri kwiminyaka engaphezu kwesixhenxe.
Omabini abalweli babuyisela iwotshi kwaye bajongeka bebukhali kumtsalane okhethekileyo ozaliswe kukulangazelela kwabalandeli bamanqindi kwihlabathi liphela. U-Barrera, olwele uninzi lwabalweli ababalaseleyo kwezemidlalo kuquka no-Erik Morales (izihlandlo ezithathu), u-Johnny Tapia, kunye noJuan Manuel Marquez, kunye nentshatsheli yehlabathi yamacandelo asibhozo ehlabathi uManny Pacquiao, ubonise uninzi lwabadlali. izakhono ezamenza waba yi-ESPN's No. 43 umlo omkhulu wamaxesha onke.
Umzantsi wepaw-slugging uPonce De Leon ubonise isitayile sakhe esingathandekiyo esamenza waba liphupha elibi lomdlalo kubo bonke ubomi bakhe. Emva kwemijikelo emithandathu yesenzo sokukholisa isihlwele, bobabini abalweli basinda bengenawo nomkrwelo kwaye bawushiya umsesane nemeko yabo yasentsomini injalo.
Kumlo obambeneyo wokuhlawulela, u-El Paso, waseTexas u-Abel Mendoza (31-0, 24 KOs) uthathe inyathelo elinye kufutshane newonga lehlabathi elidutyulwe kudidi lwe-super featherweight ngokumisa i-Mexican brawler kunye nehlabathi izihlandlo ezithathu. isihloko umceli mngeni Victor Zaleta (20-6-1, 10 KOs) kumjikelo wesine.
I-gameplan ye-Mendoza yokuhlasela umzimba yayibonakala kwasekuqaleni njengoko uxinzelelo lwakhe olungapheliyo kunye nokuvuthela komzimba ngokukhawuleza kuhlawule ngekhonkco ekhohlo kwi-chin ebambe i-Zaleta. U-Mendoza ongazange ahlulwe emva koko wanyanzela umchasi wakhe we-veteran ukuba athathe idolo kwimizuzwana yokuvala umjikelezo wokuvula emva kokudibanisa nesandla sokunene esohlwaya kumzimba owawuthatha umoya ngaphandle kweZaleta.
“Yena (uZaleta) waziwa ngokuba ngumfana olukhuni,” utshilo uMendoza emva kokuphumelela kwakhe i-31 ilandelelana. “Unamava. Ndandisazi ukuba izithonga zomzimba zaziza kumcothisa kakhulu. Isoloko ilucwangciso lwam lomdlalo: zama ukumophula, umnqande, kwaye wenze nantoni na efunekayo ukuze uphumelele umlo. Sizilolonga zonke izitayile ezahlukeneyo kwindawo yokuzivocavoca. Sasisazi ukuba siza kumophula ngeembumbulu zomzimba size sithobe isantya. Ndiqale kancinci, kodwa besisazi ukuba siza kumophula.”
Uxinizelelo olungagungqiyo lukaMendoza kunye nokuya phambili kwahlawula imbuyekezo kumjikelo wesine xa wathi wafumana enye imbumbulu embi eyathi yathumela uZaleta phantsi okwesibini. Usompempe uDavid Rios uye wangena ukuze amise umdlalo ngo-2:23 kumjikelo.
Ngokuphumelela kulowo wayekhuphisana ngokusemthethweni owacela umngeni uLeo Santa Cruz ngewonga lakhe lehlabathi ngo-2012, uMendoza usaqhubeka nokunkqonkqoza emnyango kumlo wexesha elikhulu kwinqanaba lexesha elikhulu.
“Sinethemba lokufumana umlo noLeo Santa Cruz. Simlungele,” utshilo uMendoza.
Kwelinye inyathelo, Albuquerque, NM inzalelwane Xavier Madrid (3-0, 1 KO) amanqaku knockout ebusuku xa wayeka debutante professional Daniel Arriaga kwinqanaba lokuqala. IMadrid idityaniswe nekhonkco elifutshane lasekhohlo kwi-chin ka-Arriaga, yambetha emqolo kwaye yaluphelisa ukhuphiswano umzuzu nje emva kwentsimbi yokuvula.
Ukulandelelana kokugqiba kweMadrid kuqale ngasekunene okuthe kratya kuArriaga, ngaphambi kokuba adityaniswe nekhonkco lasekhohlo angazange alibone liza iqabane lakhe. IMadrid eneminyaka engama-29 ubudala, ephumelele i-knockout yayo yokuqala, yangqina ukuba imele ukubukela kudidi lwe-welterweight.
Kwidabi labalweli ababini benza umdlalo wabo wokuqala wamanqindi, owayesakuba yi-Streetbeafs standout Jonathan Rice (1-0, 1 KO) ifumene iTKO yomjikelo wesibini phezu kukaJosh Holguin (0-1). Emva kokuba uHolguin odiniweyo ezikhuphe ngenqindi, wajikela umva kwisenzo, wazishiya evulekele iRice endlongondlongo, usompempe uRocky Burke ungene ngo-1:20 wesibini ukuze iphele inkqubo.
Kumtsalane wabalweli ababini abadlala umdlalo wabo wokuqala, uJohnny “Nicco” Tapia, unyana wentshatsheli yehlabathi eneminyaka emithandathu kunye neHolo yeFamer uJohnny Tapia, uphume esoyisa ngokufumana isigqibo esahlukileyo ngo-El Pasoan Brandon Lira.
Umlo wobunzima obuphakathi, obunemijikelo emithathu yemizuzu emibini, ubunokuhamba nokuba yeyiphi na indlela. U-Lira waqala umlo kunyawo lwangaphambili, ephuma ngobundlongondlongo kuneTapia ka-Albuquerque, esopha impumlo yelinye iqela. Nangona kunjalo, uTapia wawuvala umlo ngokucinezela isenzo. Emva kokumamela isigqibo seejaji, uTapia onemincili uye wabhiyoza eringini kunye nomama/umongameli weTapia Promotions, uTeresa Tapia.
Kumlo wokuqala wokuhlawula, uClinton ka-Albuquerque “Umntwana Womthonyama” Chavez (6-0, 4 KOs) uye waya kwisigqibo esikwimijikelo emithandathu engavumelananga negqala u-Anthony Hill (1-31, 0 KOs).
UChavez oneminyaka engama-31 ubudala wakhupha i-Hill ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni, esebenzisa uhlaselo lomzimba olukhohlakeleyo kwiNduli engaphezulu. Ngaphandle kweenzame ezilungileyo zikaChavez zokufumana amanqaku, umdlalo we-Hill wala ukuhla. Kumjikelo wokugqibela, uChavez ucinezele intshukumo kwaye waphantse u-KO'd igqala elineminyaka engama-30 ubudala, elimiswe izihlandlo ezine kuphela kwimilo engama-32. Zontathu iijaji zifumene umlo 60-54.
Kwinyathelo lokuqala phambi intshukumo pay-nge-view, ukukhanya heavyweight ithemba Angel Chavez (6-0, 5 KOs) wenza umsebenzi okhawulezayo Michael Sanchez (2-9, 2 KOs) ngokufaka iknockout kumjikelo wokuqala, ngoxa Luis Angel Ledesma (1-1-1, 1 KO) kunye noJohn Herrera (5-18-3, 2 KOs) balwela ukutsalwa kwesininzi. Ukukhupha amanqindi okuvula, angoyiswa featherweight ithemba Avoran Graham (8-0, 5 KOs) ugcine irekhodi yakhe egqibeleleyo kunye nesigqibo ngamxhelo phezu 75-umlo igqala Alejandro Moreno (24-48-3, 11 KOs).
Usasazo lwabizwa ngowayesakuba ngunobunzima kunye no-El Paso oyinzalelwane uDavid Rodriguez, kunye nepro welterweight yangoku kunye nenzalelwane yaseNew Mexico uJosh “Pitbull” Torres.
U-Artem Dalakian woyisa uLuis Concepcion, ugcina isihloko seWBA seHlabathi
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UArtem Dalakian, IDalakian vs. Concepción, ULuis Concepción	0
IAkko International Arena eKiev, eUkraine – 20 Novemba 2021
U-Artem Dalakian ubuyele kwisitayile kwaye wabetha uLuis Concepcion kumjikelo wesithoba ukuze agcine ubuntshatsheli bakhe beWorld Boxing Association (WBA) kudidi lwempukane ityeli lesihlanu ngoMgqibelo e-Akko International Arena eKiev, eUkraine.
U-Ukrainian owazalelwa eAzerbaijan wenze umlo ogqibeleleyo ngokuchasene nomdlali wakhe onyanzelekileyo kwaye wabonisa ukuba usephezulu kwiklasi ye-112-pound ngaphandle kwexesha engazange asebenze.
Iimeko ezahlukeneyo, kubandakanya ubhubhane, azizange zivumele uDalakian ukuba alwe ukusukela kunyaka ophelileyo kodwa ukungasebenzi bekungeyongxaki kwintshatsheli.
Umlo oneminyaka engama-34 ubudala uhambe eringini, wasebenzisa umgama kakuhle kwaye wayicima iPanama, owayenoburhalarhume kwaye elangazelela ukuhlutha isithsaba kodwa wasilela.
Umonde kaDalakian kwimijikelo yokuqala wamvumela ukuba afumane indlela yokulimaza "uNica" kwaye inqaku eliphambili lalikwinqanaba lesihlanu xa edibanisa indibaniselwano eyaphela ngekhonkco ekhohlo kwaye wathumela i-Central America kwi-canvas. U-Concepcion waphakama kodwa wawiswa phantsi kwakhona yintshatsheli kwaye nangona yaphinda yachacha, ukusuka kuloo mzuzu umlo wawujonge kwicala elinye.
Ngokuhlaselwa okumangalisayo kunye nesantya esihle, uDalakian wasebenza ngokukhululekile kwaye ngesithoba wathumela iPanama kwi-canvas kwakhona. UConcepcion uye waphakama wonzakala kwaye i-Ukraine yatsibela kuye inyanzela ikona ukuba icele usompempe ukuba amise.
UDalakian wahlala engoyiswanga kwimilo engama-21, i-15 kubo iphumelele ngokunkqonkqoza, ngelixa i-Concepcion yehla irekhodi yakhe kwimpumelelo engama-39, ilahleko eyi-9 kunye ne-28 yokunkqonkqoza.
UMurodjon Akhmadaliev woyisa uJose Velasquez, ugcine iWBA World Title
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	Akhmadaliev vs. Velásquez, UJose Velasquez, UMurodjon Akhmadaliev	0
I-SNHU Arena eNew Hampshire, eU.SA - nge-19 kaNovemba ka-2021
UMurodjon Akhmadaliev ugcine iWorld Boxing Association (WBA) Super Bantamweight Super Championship ngesigqibo esilungileyo esivunyelwene ngaso ephumelele uJose Velasquez ngoLwesihlanu ebusuku eSNHU Arena eNew Hampshire, eUnited States.
U-Uzbek wafumana amanqaku e-119-109 amanqaku avela kubagwebi abathathu kwaye wenza ukhuselo lwesibini lwebhanti yakhe kumdlali okhaliphileyo waseChile, owalwa kakuhle ngexesha le-12.
"U-MJ" wakwazi ukuthatha ithuba lokufikelela kwakhe kunye nesantya ukuze enze umlo kumgama kodwa ebetha ngamandla ebusweni nasemzimbeni weVelasquez. Ukutshintsha iiengile kwakuyeyona nto iphambili kukumkani, owayekwazi ukubetha aze atshintshe izikhundla ukuze abhide umchasi wakhe.
UVelasquez wayengengomchasi olula. Umzantsi waseMelika wabonisa ukuba wayengaphezu kokulungele umngeni kwaye wayesazi indlela yokusebenzisa umlindi wakhe kakuhle ngelixa ephosa iipunch zamandla kwaye wakwazi ukudibanisa kakuhle ngesandla sakhe sokunene kwimibini echanekileyo kunye nekhonkco.
Ekugqibeleni kwaba ngumlo onomdla kakhulu kwaye onzima apho uMurodjon wakhupha izixhobo zakhe ezintle kwaye wakwazi ukuthatha uninzi lwemijikelo ukugcina isithsaba sakhe esimnyama negolide, kunye nebhanti le-IBF.
Ibiyinombolo yoloyiso ye-10 kwintshatsheli, ene-7 yokunkqonkqoza kwaye ayoyiswanga. UPancora ”uVelasquez wehlise irekhodi lakhe ukuya kwimpumelelo engama-29, ilahleko ezi-7, imizobo emi-2 kunye nokunkqonkqozwa kwe-19.
UKali Reis woyisa uJessica Camara egcina iWBA yakhe yeHlabathi
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi, Umdlalo wamanqindi owasetyhini	UJessica Camara, UKali Reis, Reis vs. Camara	0
UKali Reis vs uJessica Camara
I-SNHU Arena, eManchester, eNew Hampshire, eU.SA – nge-19 kaNovemba ka-2021
Ngokugqitywa kwefilimu, uKali "Ko Mequinonoag" Reis ugcine ibhanti leWorld Boxing Association super lightweight ngokuchasene noJessica Camara waseCanada. Lo mbhobhozo wenzeke kwiNdlela eya eNgaphiswanga kwi-SNHU Arena, eManchester, eNew Hampshire, eUnited States.
Ibinzima kakhulu umlo phakathi kwaba balweli ababini abebekhuphisana kwintshatsheli yeWBA kaKali kunye newonga leWBO elingenamntu.
UCamara waqala umlo ngendlela elungileyo, ebeka intshatsheli engxakini, kodwa kwisiqingatha sesibini somdlalo wakwazi ukukhupha umoya wakhe wobukroti.
Emva kokuba imijikelo elishumi igqityiwe, abagwebi bagqibe kwisigqibo esahlukileyo: ezimbini ngo-97-93 zabona i-American Reis iphumelela ngelixa enye ngo-95-94 igwebe iCamara.
Ngaloo ndlela, i-140 lbs. Intshatsheli ye-WBA, ayiphuculanga nje irekhodi layo ukuba iphumelele ka-19 ngokunkqonkqozwa ka-5, ukubekelwa umva ka-7 kunye nokutsalwa ngoku-1, kodwa uya kuba ngumkhuphisi ekugqibeleni ka-Chantelle Cameron kuwo onke amabhanti ecandelo ngo-2022.
20 EyeNkanga 2021
URichard Riakporhe kunye noFlorian Markku baphumelele eWembley
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UAdam Azim, IBHOKISI, UDan Azeez, UFlorian Marku, UGermaine Brown, UHassan Azim, UHoseya Burton, IVAN NJEGAC, Jorick Luisetto, LEANARDO DAMIAN BRUZZESE, UMikael Lawal, UNatasha Jonas, UNick Campbell, U-Olanrewaju Durodola, ONDREJ BUDERA, UPhil Williams, URichard Riakporhe, isibhakabhaka ezemidlalo emanqindini, STU GREENER, VAIDA MASIOKATIE	0
IFOTO: BOXXER / LAWRENCE LUSTIG
URichard Riakporhe vs. Olaneewaju Durodola
UFlorian Marku vs Jorick Luisetto
UFlorian Marku wandise irekhodi lakhe lokungabethwa phambi kwamawakawaka amanye ama-Albania, efumana uloyiso lokuvala uJorick Luisetto ngaphezulu kwemijikelo esibhozo.
URichard Riakporhe vs Olanrewaju Durodola
Isihloko seWBC Silver Cruiserweight
URichard Riakporhe wamisa u-Olanrewaju Durodola ukuze akhusele iWBC Silver World Cruiserweight Championship kwaye azibekele umlo wekamva lehlabathi.
I-power-puncher engenakunqotshwa yahambisa inkcazo yokusebenza ngokusula isivakashi sakhe esinamava ngaphakathi kwemijikelezo emihlanu.
U-Riakporhe ngoku ungumceli-mngeni onyanzelekileyo kwintshatsheli ye-WBC cruiserweight ephethwe ngu-Ilunga Makabu – ukuba nje uMakuba uligcinile ibhanti kuSaul 'Canelo' Alvarez.
UDurodola wayekwinyawo elingasemva kwimizuzwana nje elishumi edabini xa ejonge usompempe enomsindo emva kokutyhalelwa ngapha kweringi nguRiakporhe.
Igqala lokulwa elineminyaka engama-44 eliye lajongana neentshatsheli zehlabathi ezinje ngoMakabu kunye noMairis Briedis kwaye waziwa ngokuba nesilevu sentsimbi, uDurodola washukunyiswa ngaphezu kwesinye kumjikelo wesithathu nowesine phantsi kongqingo lwaseRiakporhe.
Ibethelwe phantsi ngekhonkco lasekhohlo ekuqaleni komjikelo wesihlanu, uDurodola wayenemizuzu nje embalwa eseleyo: umlo wokulandela wabangela ukuba usompempe angene ukuphelisa umlo.
Njengebhanti elisanda kwenziwa leWBC Silver Cruiserweight, nto leyo emenza ukuba abe ngumceli mngeni ngokupheleleyo – nje ukuba ugqityiwe umlo ophakathi kukaMakabu noCanelo.
UDan Azeez vs Hosea Burton
Isihloko saseBritani soLight-Heavyweight
UDan Azeez yintshatsheli entsha yeBhritane kudidi lwe-light-heavyweight, kulandela ukumisa komjikelo wesixhenxe kumdlalo kaHosea Burton.
Ngokulinganayo-ifaniswe ephepheni, umlo wadibanisa owayesakuba nesihloko saseBritane kunye nentshatsheli yangoku yesiNgesi yobunzima bobunzima.
UBurton wayefuna ukubuyisela isihloko sakhe sangaphambili ngelixa uAzeez wayezimisele ukongeza kwingqokelela yakhe kunye nokuthatha umsebenzi wakhe ukuya kwinqanaba elilandelayo. Okubalulekileyo, bobabini baye bavuma ukuba umlo wawumele ithuba labo lokugqibela lokufumana ithuba elikhulu lomsebenzi.
UTyson Fury, intshatsheli yehlabathi yobunzima bobunzima, wayesecaleni kwakhe ukuze avuyele umzala wakhe uBurton, kunye nabanye abahlobo kunye nabazala bakhe abaninzi. Ibingezukuba bubusuku bosapho lwabo, njengoko uAzeez eqhubela phambili kwangethuba kumlo kwaye waphumelela ngokubanzi ukuvala amaqhinga kaBurton ukuze alawule.
Igazi lenze ukubonakala kwangoko, impumlo kaBurton ivuleke kumjikelo wokuqala emva komsebenzi obekwe kakuhle ka-Azeez, kwaye u-Azeez wagcina i-advanteji yakhe ngokuya emzimbeni kunye nokusebenza ngokusondeleyo ukutyeshela ubude bukaBurton kunye nokufikelela inzuzo.
Eqinile ekulawuleni ukuya kwindawo yesithandathu, uAzeez mhlawumbi wayenethamsanqa lokungamwisa uBurton ngesibetho esimtsibelayo entsanjeni. Kumjikelo olandelayo, u-Azeez wasitywina isivumelwano, ebetha umnqamlezo wasekunene ngomlindi kaBurton emva koko wothula isithonga esithe sabangela ukuba usompempe amise umnxeba.
UNick Campbell vs uPhil Williams
U-Nick Campbell ukwiphulo lokuba ngumdlali wokuqala we-Scots ukuphumelela intshinga yobunzima bobunzima baseBritani.
Uthathe elinye inyathelo eliya phambili kolo sukelo luyimbali ngobu busuku eLondon xa wayemisa uPhil Williams kwimijikelo emithathu nje yokugcina irekhodi lakhe elingoyiswanga kwaye wongeze enye into eqhumayo kwireel yakhe ekhulayo.
UCampbell uphantse wakhupha indoda yakhe apho kwimizuzwana nje engama-90, yamlahla phakathi komjikelo wokuqala ngomkhuhlane okhohlakeleyo, kodwa uWilliams wakwazi ukubetha ukubala kunye nokukhupha izinto ixesha elide.
Isiphelo sasingenakuphepheka nangona kwaye safika kwesesithathu, ukusebenza ngokuzinzile kukaCampbell kumzimba otsala iingalo zikaWilliam phantsi. Isandla esikhulu sasekunene safumana ikhaya laso kwaye uWilliams wehla- kwaye ngeli xesha, wahlala phantsi.
UAdam Azim vs Stu Greener
Ukubukela umninawa wakhe u-Hassan ephumelela umdlalo wokuqala, umninawa wakhe omncinci u-Adam waphonswa ukuze enze umsebenzi oncomekayo ngokulinganayo kumdlalo wakhe wesibini we-pro kunye ne-BOXXER yokuqala kwaye wayihambisa. Kwakhona ehonjiswe kaninzi njenge-amateur, uAdam waphumelela izihloko zelizwe ezilishumi, isihloko saseYurophu kunye ne-#1 indawo kudidi lwe-welterweight yolutsha.
U-Azim ubonakale equlunqwe ethatha indawo esembindini weringi ngokuchasene noStu Greener ukusuka ngaphandle kwaye wabeka ipunch egqibeleleyo yokusebenza, ethanda iindlela eziphezulu ezinamandla kunye nezidubulo zomzimba. U-Azim peppered Greener kunye nokudubula, ukuxuba ukusuka entloko ukuya emzimbeni kwaye wawisa iGreener ekupheleni kokuqala ngesandla esikhulu sasekunene ukuya kwicala lentloko.
Wachacha waya ekoneni yakhe, kodwa ephuma kumjikelo wesibini iAzim ijonge ukuphelisa izinto kwangethuba yawisa uGreener ngesinye isandla esikhulu sasekunene, waphakama kodwa itawuli yaphoswa ngekona yakhe. Ukugqiba okuchukumisayo kumlo kunye nokuqalwa komsebenzi obalaseleyo.
U-Mikael Lawal obethe kakhulu uphumelele ngesimbo sokuqhushumba xa edubula ilungelo elikhulu lokumbambisa uLeanardo Damian Bruzzese. Yayilulo lwesibini emva kokuphumelela i-KO kuMalusi Bush Lawal kulandela ukuphumelela kwakhe komjikelo wesithathu we-KO uBenoit Huber kwinyanga ephelileyo. 'I-Lethal' Lawal yenzakalise i-Italian yase-Argentinian Bruzzese kumjikelo wokuqala nge-uppercut enkulu emenze wabambelela.
Kweyesibini uLawal uye wawisa uBruzzese ngehuka yasekhohlo kodwa uphakame kwisibhozo waphinda wasebenzisa isandla sasekunene kodwa wadibana nesibhozo. Umjikelo wesithathu wabona ukubuyisela kwaye uthathe umlo eBruzzese.
Kweyesine uLawal wayesothula izithonga ezinzima kunye neBruzzese ekoneni kodwa uMzantsi Merika onzima wancamathela apho. Kuthe kumjikelo wesihlanu uLawal wafumana ishoti yakhe yedayimani eyathi ekugqibeleni yamkhupha umntu wakhe.
Hassan Azim def. U-Ivan Njegac (TKO R1 0:51)
U-Hassan Azim ongumdlali we-Amateur wavula i-akhawunti yakhe ngokukhawuleza nangempumelelo eyothusayo yomjikelo wokuqala we-KO kumdlalo wakhe wokuqala ngokuchasene no-Ivan waseCroatia.
I-6ft 1in welterweight evela kuSlough, owayesakuba lilungu leQela le-GB kunye neMbasa yeBronze kwiMidlalo yeOlimpiki yoLutsha yowama-2018, iMbasa yeSilivere kuKhuphiswano loLutsha lwaseYurophu kunye neNtshatsheli yeSizwe yamaxesha amathandathu, ugqalwa njengomnye wabadlali abagqwesileyo ukuba bajike njengepro kule minyaka yamva nje. .
U-Azim waphuma ngenyawo elingaphambili kwaye wamisa iijabs ezilungileyo ezomeleleyo ukuze afumane uluhlu lwakhe. Kwimizuzwana embalwa emva koko wawela ihuku yasekunene eqhushumbayo ezantsi uNjegac, nangona wavuka ngentsimbi yethoba usompempe ezimisele ukuba akakwazi ukuqhubeka wayiwangawangisa.
Ukuziva kweLiverpool uNatasha Jonas ubuyile ngempumelelo kumdlalo wakhe wokuqala weBOXXER elindelwe ngamanqaku uloyiso kuVaida Masiokaite waseLithuania. UJonas wayekulawulo olupheleleyo njengoko wayesebenza ijab yakhe yasezantsi, wathatha umbindi weringi kwaye akazange achithe naziphi na iinqindi.
Umceli-mngeni wewonga lehlabathi izihlandlo ezibini wayejongeka ekumgangatho ophezulu njengoko wayechwechwela uMasionkaite owomeleleyo. Kumjikelo wesihlanu uJonas uye wayinyusa wahlaba izithonga eziqatha ezilandelelanayo kuMasionkaite wajolisa emzimbeni. UMasionkaite uqhubekile nokulwa de kwasekupheleni, kodwa uJonas ebephambi kokuphumelela kwikhadi likasompempe ngo-59-55 kwaye wajolisa kwiwonga lesithathu lehlabathi ngo-2022.
U-Kingston's Germaine Brown uwuqabelise umdlalo ngomboniso ogqwesileyo ukubonisa u-Ondrej Budera wase-Czech Republic ehlala ixesha elide kunye no-60-54 kwikhadi lamanqaku likasompempe.
UBrown wenziwa ukuba asebenze nguBudera kwaye wanika iLondoner ukuphumla okuncinci, kodwa uBrown ofunde kakuhle wasebenzisa i-jab yakhe kakuhle, iipuntshi ezahlukeneyo kunye nesantya sokufumana isigqibo. UBrown wagcina irekhodi lakhe elingabethelwanga kwi-11-0 kwaye ujolise kumngeni wesihloko seNgesi ngokuchasene nentshatsheli uCharlie Schofield.
UDan Azeez uyachaza. UHoseya Burton (TKO, R7)
Isihloko esingenamntu se-BBofC saseBritani esiKhanya esinzima
URichard Riakporhe uyachaza. Olanrewaju Durodola (TKO, R5 0:36)
ISitayitela seSilver Cruiser seBhunga lehlabathi elingenamntu
UFlorian Marku uyachaza. UJorick Luisetto (PTS, 8/8)
UMikael Lawal vs Leonardo Damian Bruzzese (TKO R5)
UAdam Azim uyachasa. Stu Greener (TKO, R2)
UNatasha Jonas uyachaza. UVaida Masiokaite (PTS 6/6)
UGermaine Brown uyachaza. Ondrej Budera (PTS)
UNick Campbell uyachaza. Phil Williams (TKO, R3 2:00)
Hassan Azim def. U-Ivan Njegac (TKO R1)
Ukuba uyayithanda into esiyenzayo, nceda ucinge ngomnikelo omnye wokusinceda sikhule kwaye sikuzisele iindaba ezingakumbi zamanqindi kunye neziphumo (unokwenza intlawulo ephindaphindiweyo). Konke kukhuselekile kwaye ngePayPal...cofa nje umfanekiso wePayPal ongezantsi:
Bhalisela isitishi sethu esitsha sikaYouTube ngeendaba zamva nje zamanqindi kunye neziphumo, intlebendwane kunye nolwazi oluvela kwihlabathi liphela. Cofa nje umfanekiso ongezantsi okanye nayiphi na imifanekiso kuyo yonke imidiya yethu yoluntu:
UAndrade uxhele uQuigley kumlo wengxelo-iziphumo zekhadi lokulwa
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	Andrade vs Quigley, UDemetrius Andrade, UJason Quigley, UJessica Camara, UJose Velasquez, UJulio César Martínez, UKali Reis, McWilliams Arroyo, UMurodjon Akhmadaliev	0
UDemetrius Andrade vs uJason Quigley
I-SNHU Arena eManchester, eNew Hampshire, eU.SA - nge-19 kaNovemba ka-2021
U-Demetrius Andrade uye wakhupha impumelelo ye-KO eqhumayo awayeyithembisile njengoko etshabalalisa uJason Quigley kwimijikelo nje emibini yokhuselo lweWBO World Middleweight itayitile eSNHU Arena eManchester, eNew Hampshire, ehlala kwihlabathi liphela kwiDAZN.
U-Andrade waqala ngomlilo wakhe wesiqhelo, ngohlaselo olunamadyungudyungu ekupheleni komjikelo wokuqala womgangatho uQuigley owothukileyo – omnye umceli mngeni ukubetha iseyile ekuqaleni kokhuselo lweAndrade World.
Ngeli xesha, nangona kunjalo, u-Andrade akazange awuvumele umlo ukuba ungene nzulu, kwaye ezinye izithonga ezibini zabona usompempe esindisa indoda yaseIreland kwisohlwayo esingaphaya emva kwe-2.24 yomjikelo wesibini-uAndrade ehambisa uhlobo lomboniso ochulumancisayo wamandla, uburhalarhume kunye nokuchaneka awayexelelwe ukuba makakwenze. enze ukulwa imilo emikhulu awayeyinqwenela.
“Ndenze into ebendisithi ndiza kuyenza, bendikhangeleka ndilungile kwaye ndiziva ndilungile,” utshilo uAndrade. “Ndizise umyalezo ngobu busuku – yintoni elandelayo kwaye ngubani olandelayo.
Ngalo lonke ixesha ndingena eringini, ndenza into eyahlukileyo, kwaye ndingayenza yonke, kwaye nantoni na endiyidingayo. Umonde. Amaxesha amaninzi, ubona abantu bewiswa phantsi baze bawise omnye umfana. Ke, ndihlala ndinomonde apho kwaye ndilinde ukuba izithonga zifike. Kodwa ucele iiKO, ndikunike iiKO masihambe.
Ndineminyaka engama-31-0, yintshatsheli yeOlimpiki kunye neHlabathi, yintoni enye ekufuneka ndiyenzile?
Isiqalo esingalawulekiyo songquzulwano ekudala silindelwe phakathi kwentshatsheli yeWBC World Flyweight uJulio Cesar Martinez kunye nentshatsheli yethutyana uMcWilliams Arroyo yanqunyulwa kabuhlungu emva kokungqubana kwentloko ngengozi ekhohlo u-Arroyo enenxeba elibi phantsi kweshiya leliso lakhe lasekunene, kwaye usompempe wanyanzeliswa. ukubiza uKhuphiswano olungekho.
UArroyo wasePuerto Rican waqala ngefashoni eyothusayo, ebeka phantsi uMartinez kwangoko kumjikelo wokuvula, kodwa intshatsheli yaziphindezela kwangoko yabeka iArroyo kwiseyile ekupheleni komjikelo. Umdlali waseMexico wabeka i-Arroyo phantsi kwakhona kumjikelo wesibini ngaphambi kokungqubana okulishwa kweentloko okuye kwaphelisa ukhuphiswano olwalungaphezulu kokuphila ngokwentlawulo yalo.
UMurodjon Akhmadaliev wagcina iWBA kunye ne-IBF World Super-Bantamweight ephumelele umdlalo ongene endaweni ka-Jose Velasquez. 'MJ', owayeza kudibana nomceli mngeni onyanzelekileyo we-WBA uRonny Rios, kodwa uVelasquez wangena emva kokuba iRios ikhutshwe ne-COVID kwaye iChile yabonisa ukuba ikwinqanaba elikhulu kwaye iya kuphinda ibonwe- kodwa uAkhmadaliev wayekhululekile kuyo yonke indawo kwaye ebhankini. I-12 imijikelo eyongezelelekileyo kumdlalo wakhe weshumi kwaye wafumana uloyiso ngo-119-109 kuwo onke amakhadi amathathu.
Kuya kubakho intshatsheli engenakuphikiswa ku-140lbs ngo-2022 – kwaye nguKali Reis oza kujongana noChantelle Cameron kuwo onke amabhanti kudidi lweSuper-Lightweight njengoko ekhupha uJessica Camara ngesigqibo esahlukileyo. UReis waseMelika kunye nowaseCanada basebenzela ukonwabisa kwasebukhosini kubalandeli ngokuhambelana nomlo wamva nje weqonga lehlabathi labasetyhini, kwaye uReis wafumana inqaku kumakhadi (97-93, 94-96, 97-93) emva koko wajongana- uphume noBriton Cameron eringini emva koko ukuze baqale ukubala ukuya edabini kunyaka ozayo.
“Bendicinga ukuba ndiwuphumelele umlo,” watsho uReis. “UJessica wenze umlo oqaqambileyo, kodwa ndivakalelwa kukuba ndenze umsebenzi wokucoca. Ndonwabe kakhulu kwaye andinakulinda ukulwela umlo ongenakuphikiswa kunyaka ozayo, liphupha lam elo.”
19 EyeNkanga 2021
USonny Conto uthatha ngaphandle uJoel Caudle e 3 e Live Casino Hotel Philadelphia
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UBilal Quintyne, UChristopher Burgos, Conto vs. Caudle, UDaiyann ​​Butt, Gerardo Martínez, UYeremiya Kendrick, UJoel Caudle, UMaurice Burke, Siefullah Bulumko, USonny Conto, Tariq Luhlaza, Tunde Fatiregun, Tyrone Lewis	0
USonny Conto vs. Joel Caudle
Live Casino Hotel Philadelphia, USA - 18 Novemba 2021
USonny Conto walufumana uvavanyo lwemijikelo emibini, kodwa waluphumelela ngemibala ephaphazelayo njengoko wayemisa uJoel Caudle kumjikelo wesithathu womjikelo omiselweyo wemijikelo emithandathu phambi kwenginginya kwikhadi lomlo lokuqala eLive Casino Hotel Philadelphia. .
UCaudle wema phakathi waza wazidubula. UConto wanika kakuhle njengoko wamkela njengoko washukumisa uCaudle izihlandlo ezininzi kwimijikelo emibini yokuqala. Kumjikelo wesithathu, uCaudle waqhubeka nokuma kwaye wayefuna ukurhweba neConto enkulu., Kodwa uConto wamisa isandla esikhulu sasekunene esathumela uCaudle kumgangatho, nto leyo eyenza ukuba isihlwele se-pro-Conto siqhume ngokudumisa. UCaudle wema ngeenyawo, kodwa eshukuma, kwaye usompempe u-Benjy Esteves wawumisa umlo ekupheleni komjikelo wesithathu.
Conto, 220.2 lbs of Philadelphia yi 8-0 kunye knockouts ezisixhenxe. I-Caudle, i-257.1 lbs ye-Raleigh, i-NC yi-8-6-2.
Kukhuphiswano olonwabisayo, uChristopher Burgos uye wafumana inqaku elibi ngokuphumelela imijikelo emithandathu ngazwinye kwisigqibo ngoGerardo Martinez.
UBurgos ukwazile ukuwisa izithonga ezitsala amehlo ngakumbi kumlo, owabona umlo ngamnye etshintshisana ngokulawula intshukumo.
I-Burgos, i-138.9 lbs yasePhiladelphia iphumelele ngamanqaku e-59-55 kabini kunye ne-58-56 kwaye ngoku i-3-4-1. Martinez, 138.7 lbs of Coatesville, PA yi 5-2.
UDaiyann ​​Butt woyise uSiefullah Wise ngomjikelo wesithathu wokungafumaneki kumlo omiselweyo onemijikelo emithandathu yodidi lwe-welterweight.
UBulumko waxhuzulwa amanqaku ngokubamba kunye nokubetha kumjikelo ngamnye wemijikelo emibini yokuqala. U-Wise wohlwaywa ngokubetha emva kwentloko kumjikelo wesithathu, kwaye usompempe u-Benji Esteves ubone ngokwaneleyo kwaye wawumisa umdlalo imizuzwana engama-53 kumjikelo wesithathu.
Butt, 142.4 lbs of Philadelphia is 9-1. Ubulumko, i-144.6 lbs yasePhiladelphia yi-4-8.
UJeremiah Kendrick wenze umdlalo wokuqala oyimpumelelo ngokubetha uTyrone Lewis kumjikelo wokuvula kukhuphiswano olucwangcisiweyo lwemijikelo emine yodidi oluphakathi.
UKendrick wehla ekunene entloko eyamothusayo kwaye yamenzakalisa uLewis, kwaye ingqindi elandelayo yambeka phantsi. Usompempe uShawn Clark uye wawumisa umlo emva kokuba uLewis eme ngeenyawo ngo-1:05.
U-Bilal Quintyne ubedinga ithontsi lokugqibela ukuze athathe isigqibo sesininzi semijikelo emine phezu kuka-Maurice Burke kumlo wemijikelo emine yobunzima obuphakathi obungoyiswanga.
UBurke wayelawula isibini sokuqala semijikelo njengoko wayemisa izandla zasekunene ezomeleleyo.
Kumjikelo wesine, uQuintyne wawisa uBurke ngesandla sasekunene esiqinileyo.
UQuintyne, i-159.8 lbs yaseMarietta, i-GA iphumelele ngamanqaku e-38-37 kabini kunye ne-38-38 ukuphakamisa irekhodi lakhe kwi-2-0. Burke, i-160.6 lbs yasePhiladelphia yi-1-1.
U-Tariq Green wenze i-pro debut eyimpumelelo ngesigqibo esimjikelo esine ngazwi-nye malunga neTunde Fatiregun kumlo onzima onzima.
Uhlaza, i-174.5 lbs yasePhiladelphia iphumelele ngamanqaku e-40-36 kunye ne-39-37 kabini kwaye ngoku i-1-0. I-Fatiregun, i-176 lbs ye-New Brunswick, i-NJ yi-1-1.
Lo mboniso wakhuthazwa nguJoe Hand Promotions edibene neBAM Boxing kunye nePeltz Boxing.
Iifoto nguDarryl Cobb Jr.
URolando Soto woyisa uHéctor Coronado eMatamoros, eTamaulipas
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	Héctor Coronado, UMatamoros wam othandekayo, Rolando Soto, Soto vs. Coronado, wbc	0
Rolando Soto vs. Héctor Coronado
Matamoros, Tamaulipas – 12 Novemba 2021
NgoLwesihlanu odlulileyo ikhadi elimnandi elibizwa ngokuba yi-"My Dear Matamoros" lenzeke kwisixeko saseMatamoros, eTamaulipas, phantsi kwenkuthazo uPepe Alcaraz Omnci., kwiholo kamasipala ethengisiwe; apho kumlo ophambili ubuqhutywa phakathi kuka-Rolando Soto no-Héctor Coronado kumlo oxhaswa liBhunga leHlabathi lamanqindi.
U-Rolando ubonise amandla akhe ngokuthwesa isithsaba se-FECARBOX cruiserweight kwi-2: 33 ngomzuzu we-2nd round ngokunika umchasi wakhe ukudubula komzimba, apho wayengenakukwazi ukubuyisela emva kwe-akhawunti yokukhusela.
Eli khadi linemilo eyi-9 yobuchwephesha kwaye amakhulu abalandeli angonwabela umntu kunye neemayile ngokusebenzisa amaphepha kaFacebook womgqugquzeli.
16 EyeNkanga 2021
UMusa Yamak woyisa uSiarhei Huliakevich weWBF International Title
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	Musa Yamak, USiarhei Huliakevich, I-WBF, I-World Boxing Federation, Yamak vs. Huliakevich	0
EBuergerhaus, eGarching, eJamani-ngomhla we-13 kuNovemba ka-2021
Umbutho wamanqindi weHlabathi ongenamntu (WBF) weHlabathi weSitayitela wobunzima boLight Light
UMusa Yamak uphumelele iwonga elingenamntu leWorld Boxing Federation (WBF) International Light Heavyweight intshinga ngobusuku bangoMgqibelo, Novemba 13, eGarching, eJamani, ngaphandle nje kwaseMunich.
Indoda yasekhaya eneminyaka engama-38 yahlula uSiarhei Huliakevich ngokunkqonkqoza kobugcisa xa iBelarusian yafumana ingqiniba yonzakele kwaye ayizange iphume kwisibhozo.
Ukuza kuthi ga ekupheleni, ibingumdlalo okhuphisanayo ngokulinganayo, kodwa uYamak wabonakala eyindoda eyomeleleyo kwaye ejonge phambili.
Intshatsheli entsha yaMazwe ngaMazwe, ephumelele intshinga ye-WBF Eurasia ngo-2019, iphucule irekhodi layo laya kutsho ku-8-0 (8).
U-Huliakevich (i-40), i-pro ukususela ngo-2003 kunye nowayesakuba yi-Champion yaseYurophu kunye ne-world title-challenger, ngoku i-43-14-2 (17).
15 EyeNkanga 2021
U-Alycia Baumgardner ngokumangalisayo u-KOs uTerri Harper weWBO kunye nezihloko ze-IBO
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi, Umdlalo wamanqindi owasetyhini	UAlycia Baumgardner, Harper vs. Baumgardner, UTerri Harper	0
Imifanekiso nguMark Robinson Matchroom Boxing
I-Sheffield Arena eSheffield, eNgilani 13/11/21
U-Alycia Baumgardner waba yintshatsheli yehlabathi ye-WBC/IBO Junior Lightweight ngokunqanda umjikelo wesine ngokulawula kunye nentshatsheli eyayikade ingoyiswanga uTerri Harper eSheffield Arena eSheffield, eNgilani.
U-Baumgardner, oye wangena njenge-underdog enkulu ngaphezu kwe-7 ukuya kwi-1, wenzakalisa uHarper kumjikelezo wesibini kunye nezandla ezinzima zasekunene.
Kumjikelo wesine, uBaumgardner wafumana isandla esikhulu sasekunene esothusayo samothusa uHarper. UHarper wayengashukumi ezinyaweni zakhe. U-Baumgardner utsibele phakathi kwaye wabeka enye ihuka ekhohlo enamandla ngakumbi njengoko usompempe uMark Lyson wayemisa umlo kwimizuzwana nje engama-23 kumjikelo.
UBaumgardner, waseBingham Farms, eMichigan udlula eFremont, eOhio, okhuthazwa yiKing’s Promotions, uba yintshatsheli yehlabathi enerekhodi le-11-1 ngokubethwa kasixhenxe.
“Abo bebengandihoyanga, bandifutha. Abantu baye babona i-tad yokuba ngubani u-Alycia. Ekubeni wonke umntu wayendikrweca, ndayiwola yaza yandimpompa ngakumbi. Ndithe xa ndisihla ngenqindi ndeva onke amandla am embetha kanye esilevini. Ndithe ndakumbona ebuhlungu ndaqonda mandimgqibe kwangoku. Ndacinga ngoko nangoko ukuba ndiyenzile, kwaye ndiyintshatsheli yehlabathi. Ndifuna ukudibanisa icandelo, kwaye ndiza kuba yintshatsheli engenakuphikiswa,” utshilo uBaumgardner.
“Ndiyazingca ngoAlycia. Ubonise ukuba yintshatsheli yokwenyani malunga nayo. Yangena kumhlaba wotshaba, yaza yangena apha yawisa intshatsheli. U-Alycia ngumlo okhethekileyo kwaye ukuphumelela ubuntshatsheli ngefashoni ayenzileyo bekumnandi nje ukungqina. Maninzi amathuba aphambili aphambi kwakhe, kwaye xa ixesha lilungile, siya kuhlala phantsi no-Eddie Hearn kunye neMatchroom Boxing kwaye sijonge ezi ndlela zokukhetha. Ufanelwe lixesha lokubhiyozela le mpumelelo imangalisayo,” utshilo uMarshall Kauffman, iCEO yeKing's Promotions.
“UAlycia wenza into ebendisoloko ndikholelwa ukuba uya kuyenza xa samtyobela kwiminyaka emithathu eyadlulayo. Ndandisazi ukuba u-Alycia uza kuphumelela itayitile yehlabathi kwaye yafikelela kwisiqhamo. Ekuphela kwento awayeyidinga yayilithuba elinye, kwaye khangela ukuba kwenzeke ntoni na. Ndivakalelwa kukuba kwixeshana nje elingephi, u-Alycia uzakuba ngomnye wabo, ukuba ayingobuso bamanqindi wabasetyhini,” utshilo u-Andrew Foy weKing’s Promotions.
UClara Lescurat woyisa uYusbely Torrealba eSabaneta, eColombia
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi, Umdlalo wamanqindi owasetyhini	UClara Lescurat, Lescurat vs. Torrealba, WBA, Yusbely Torrealba	0
Clara Lescurat vs. Yusbely Torrealba Isiphumo
Sabaneta, eKholombiya 13/11/21
Ngerekhodi elingenasiphako, uClara Lescurat yintshatsheli entsha ye-WBA FEDELATIN kudidi lwempukane. Kumsitho wangoMgqibelo eSabaneta, eColombia, eLescurat, waseArgentina, woyisa uYusbely Torrealba waseVenezuela ngokukqonkqoza kobugcisa kumjikelo wesithathu.
Ekuqaleni, uLescurat wayecwangciselwe ukujongana no-Oscarys Zarraga, kodwa ngenxa yeengxaki, utshintsho lomchasi kwafuneka lwenziwe.
UClara ugcina kumdlalo wakhe wamanqindi, olo phawu lubalaseleyo lokubetha ngenqindi olukhatshwa sisikhalo esiphawula izithonga ngesantya ukuze abuye umva. Kodwa ukwazile ukudibanisa ubundlongondlongo obamkhokelela ekubeni aphumelele ibhanti lakhe lokuqala.
Ngokudityaniswa okucocekileyo kweecuts ezinqamlezileyo kunye ne-uppercut ukuya kwindawo yesisu, i-Lescurat yoyisa i-Torrealba kwisivunguvungu samanqindi esikhokelele usompempe ukuba ayeke iintshukumo kumjikelo wesithathu.
Owayesakuba ngummeli weqela lesizwe lase-Argentina, uLescurat akoyiswanga kwizinto ezi-5 ezithunyelweyo, ezi-3 zazo zibe ngokuknockout.
UJazmín “La Jefa” Villarino woyisa uYenifer Leon eSabaneta, eColombia
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi, Umdlalo wamanqindi owasetyhini	UJazmín Villarino, Villarino vs. Leon, WBA, Yenifer Leon	0
UJazmín Villarino vs. Yenifer Leon
Coliseo Zona Norte e Sabaneta, Colombia 13/11/21
Ngovakalelo olukhulu, ummeli waseArgentina uJazmín “La Jefa” Villarino, uphumelele ubuntshatsheli begolide boMbutho weBhokisi weHlabathi. Uloyiso lweza emva kwesigqibo sembangi uYenifer Leon, sokungaphumi ukulwa kumjikelo wesixhenxe. Lo ibingumlo obubonakalayo ngoMgqibelo ebusuku eColiseo Zona Norte eSabaneta, eColombia.
Ukhuphiswano lwaqala ngendlela eyonwabisayo xa umlo waseVenezuela, "La Negrita" Leon, wasebenzisa amava kunye neqhinga lakhe ukugcina umgama kunye nokusebenzisa ulwaphulo-mthetho xa efumene ithuba. Emva koko, bobabini abalwi baqala ukubamba indawo ephambili kutshintshiselwano.
Ngaphandle komceli mngeni kaLeon, uVillarino ukwazile ukoyisa owazalelwa eMaracay ngamandla omzimba kunye nomthamo omkhulu wamanqindi aqinisekisayo njengalawo aphakathi kwendawo ukuvala umjikelo wesithandathu kwaye akhokele uLeon ukuba athathe isigqibo sokuba sele efikile.
UJazmín Villarino uneminyaka engama-31 ubudala yaye wazalelwa eBariloche, isixeko esikwiphondo laseRío Negro, kumazantsi eArgentina. Emva koko wahamba nosapho lwakhe ukuya eSpain apho wakhulela khona waza wathandana nomdlalo wamanqindi. Xa wabuyela eArgentina, wavuna umsebenzi onempumelelo. Ukongeza, ube ngumama ukusukela ngo-2018 kwaye ufundisa kwiindawo zokuzivocavoca.
Ibhanti yeGolide yequmrhu loovulindlela linyathelo lokuqala elikhulu lokuzibeka kwinqanaba eliphezulu lobuchwephesha kwihlabathi.
UAndy Owen woyisa uKearon Thomas kunye neziphumo ezivela kwiWalsall FC yaseNgilani
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	Alejandro Torres, UAndy Owen, UBradley Thompson, UJosh Anderson, KEARON UTOMAS, U-Lewis Morris, ULuka Merrifield, Owen vs. Thomas, UPaul Holt	0
Andy Owen vs. Kearon Thomas Isiphumo
Bekukho i-quartet yoloyiso lwasekhaya kwi-BCB Promotions 'Rising Stars show eWalsall FC phezolo (ngeCawa, we-14 kaNovemba).
Phezulu kwebhilidi kwakukho ukukhululwa kwe-Wolverhampton's Andy Owen owabuyela kwindawo yokuqala, kwaye kuphela, ilahleko yobungcali. U-Owen wothuswa nguNorbert Szekeres kwindawo enye ngoSeptemba kodwa wabeka ibhokisi kakuhle ukubeka olo loyiso emva kwakhe njengoko ebonisa uWalsall's Kearon Thomas.
U-Owen waqala kakuhle wabeka uThomas kunyawo lwangemva. Ityala kuTomas nangona kunjalo, owaphuma kuluhlu kwaye wenza kube nzima ukuba u-Owen afike kutshintshiselwano lwangaphambili. U-Owen waqala ukuhamba uTomas phantsi njengoko umlo uqhubela phambili kwaye wathatha iifoti zakhe kakuhle. Usompempe ngorhatya, uShaun Messer, uye wafaka amanqaku kukhuphiswano ngama-40-36 kwicala lika-Owen.
U-Bradley Thompson waseTelford wasinda kuloyiko xa wayebonakala eshenxisa igxalaba lakhe okwethutyana phakathi kukhuphiswano lwakhe lwemijikelo emine no-Alejandro Torres waseSpain. Uneminyaka engama-20 ubudala, umntakwabo weNtshatsheli yamaNgesi uLiam Davies, wayedlala amanqindi kakuhle kwaye ehamba ngegiya xa igxalaba lakhe lalibonakala ngathi liyaphuma njengoko wayephosa ijab.
Ukuthatha ubungcwele be-canvass, uThompson wayejongeka esezintlungwini zokwenyani kodwa igxalaba lakhe labuyela ngaphakathi kwaye, ngeli lixa wayemkhathaza kakhulu, wakwazi ukuphosa ibhokisi ngomva wakhe. Uphumelele ukhuphiswano ukurekhoda impumelelo engama-39-37.
ULewis Morris weBloxwich naye uye waya ku-2-0 njengoko wabetha uJosh Anderson kwakhona kwimijikelo emine. UMorris, i-stablemate ka-Owen, uqeqeshwe nguRichie Carter ovela kwi-Wolverhampton Boxing Club kwaye wayelawula ngokuchasene nomchasi wakhe oseBirmingham. Ityala kuAnderson nangona; uye weza kuhambo kwaye uMorris uya kuba efunde okuninzi kukhuphiswano, aluphumeleleyo 40-37.
UPaul Holt waseBirmingham ugqibezele umboniso wamakhadi amane njengoko wamkelekile ukubuyela kwikona yasekhaya okokuqala kwiminyaka emithathu. Ukubetha amanqindi kakuhle kwaye ekhangeleka efanelekile kwaye ebukhali, uHolt woyise uLuke Merrifield waseShrewsbury ngo’40-36.
IiNkuthazo ze-BCB zibuyile ekusebenzeni ngoDisemba kunye nemiboniso emininzi. Iinkcukacha ezithe kratya zinokufumaneka ku-bcb-promotions.com.
U-Oleh Dovhun woyisa uGlenn Dezurn kunye neziphumo zasePittsburgh, eMelika
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	Arturo de Islands, UDeon Goodlow, Dovhun vs. Dezurn, Ethan Hayes, Glenn Dezurn, UJames kwangoko, UJohnny Spell, Lucas Steel, UMateyu Wright, Oleh Dovhun, URosalindo Morales	0
Isiphumo se-Oleh Dovhun vs. Glenn Dezurn
Igumbi leCathedral ePittsburgh, eU.SA 13/11/21
Izolo ebusuku yayiyenye yemiboniso yeklabhu engalibalekiyo ePittsburgh kwinkumbulo yamva nje. I-Integrity Fighter Management ngokubambisana ne-STAR Boxing kunye nomdlali wamanqindi uBrian Dillon Boxing bahlanganise ikhadi lemilo ehambelana kakuhle.
Kumnyhadala ophambili, u-Oleh wasePittsburgh ongabethwanga “I-Ukrainian Pitbull” Dovhun ujongane ne-Baltimore's power punching (14-2-1) Glenn Dezurn kwi-WBA NABA Super bantamweight engenamntu.
Ukusuka emnyango, uDovhun wayelawula yonke into eyenzekayo. Umjikelo emva komjikelo, i-Ukrainian Pitbull yasebenzisa i-Lomenchenko-esque ngqo ngasekhohlo, indlela ephezulu yasekunene kunye ne-combos ethe tye yasekhohlo eyahlula umlindi omkhulu we-Dezurn ehlala ihambela phambili. Ukungqubana kweentloko kumjikelo wesine kubangele amanxeba amancinane kwicala lasekhohlo laseDovhun. Umqeqeshi uMichael McSorley ugcine ukopha phantsi kolawulo phakathi kwemijikelo. U-Dovhun wabeka ukuvalwa okungenasiphako kwaye abagwebi babona ngendlela efanayo kunye ne-100-90 ngaphesheya kwebhodi. UDovhun uya kwi-13-0 kwaye uya kufumana i-15 ephezulu ye-WBA ranking.
Kwi-Co-Feature, i-US Marine Rosalindo "Rosie" Morales esuka e-Ellwood City PA iya kwi-6-0 kunye nokuphumelela kwe-UD eMonterrey, eNuevo Leon, yaseMexico (2-0) Arturo de Islas. Umlandeli owuthandayo uMorales uhlala efumana izithonga ezinzima kulo lonke ixesha lemijikelo emithandathu. UMorales kwafuneka ahambe kwaye asebenze nzima ukuze aphumelele njengoko umceli mngeni waseMexico akazange ayeke ukuza.
I-Pittsburgh super featherweight "TTG" uJohnny Spell waya kwi-5-0 kunye noloyiso kwi-Washington DC (5-7) i-veteran James Early. Kumjikelo wesi-3, kwangethuba waqala ukugculela u-Spell ngokubeka izandla zakhe ngasemva kwiTyson Fury ngendlela efanayo. Isipeli sasilawula umjikelo we-4 ngothotho lwezandla zasekunene kunye namagwegwe asekhohlo awayelahlekile kwangethuba kuhlaselo.
U-Butler PA (1-1) uLucas “Hands of American” Steel ufumene impindezelo kumdlalo wakhe wemijikelo emithandathu nomdlali weMorgantown (4-1) uMatthew Wright. Lo yayingumlo osondeleyo. Abagwebi abathathu bacinga ngenye indlela baza banika uAdams isigqibo ngamxhelo mnye. U-Ethan Hayes wasePreston West Virginia uye waya ku-3-0 ngoloyiso lwe-UD phezu kwe-Pittsburgh's gritty Deon "The Bloodhound" Goodlow owehla ngoku kwi-2-4.
UDina Thorslund woyisa uZulina Munoz kukhuselo lweWBO lwesihloko eDenmark
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi, Umdlalo wamanqindi owasetyhini	UDina Thorslund, MTK, Munoz kunye neMunoz, UZulina Muñoz	0
Isiphumo seDina Thorslund vs. Zulina Munoz
Kolding Hallen eDenmark 13/11/21
UDina Thorslund ubonakalise kwakhona ukuba ngoyena mlweli we-118lb ubalaseleyo kwihlabathi njengoko egcine intshinga yakhe ye-WBO bantamweight ngokuloyisa uZulina Munoz..
Aba bafazi babini babekhuphisana kwi-Kolding Hallen eDenmark, kunye neThorslund (17-0, 7 KOs) ebeka intsebenzo engakholelekiyo ukoyisa i-Munoz (53-4-2, 30 KOs) ngokumiswa komjikelo wesixhenxe.
Oku kuthetha ukuba intshatsheli yehlabathi enobunzima obubini u-Thorslund wenze ngempumelelo ukhuselo lokuqala lwesithsaba sakhe sodidi lwe-bantam, emva kokuba ebambe newonga le-WBO super-bantamweight ukusuka ngo-2018 ukuya ku-2021.
Kwenye indawo ngoMgqibelo, uDonte Dixon (6-0, 3 KOs) waqhubeka nokunyuka kwakhe ngokukhawuleza, njengoko oneminyaka engama-21 ubudala wenyuka kukhuphiswano waza wazuza impumelelo encomekayo ngokuchasene noJordan McCorry (19-8-1, 4 KOs), kunye usompempe uyifake 77-73 kuDixon emva kwemijikelo esibhozo.
UWill Cawley (1-0) uqalise umsebenzi wakhe wobuchule kwisiqalo esigqibeleleyo ngo 40-36 amanqaku ajikelo amane aphumelele uStephen Jackson kumdlalo wakhe wokuqala wobugcisa, ngelixa uKhalid Ayub (2-0) wabuyela ngasemva njengoko woyisayo. Stanko Jemelic 40-35 ngamanqaku emva kwemijikelo emine.
14 EyeNkanga 2021
UDavid Benavídez umisa uKyrone Davis ePhoenix
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	Benavidez vs. Davis, UDavid Benavidez, Emanuel Torres, UJose Benavidez Omnci., UKyrone Davis	0
UDavid Benavidez vs. Isiphumo se-Kyrone Davis
Iziko lokunyathela, ePhoenix, eArizona, eU.SA 12/11/21
Intshatsheli yehlabathi engazange yoyiswe izihlandlo ezibini uDavid “El Bandera Roja” Benavídez ubuyele kwidolophu yakowabo iPhoenix okokuqala ngqa kwiminyaka emithandathu kwaye wawuvala umboniso ngendlela emangalisayo, wafumana iTKO yomjikelo wesixhenxe kulowo wayekhuphisana noKyrone Davis kumsitho ophambili. siphila kwi-SHOWTIME evela kwiZiko leeFootprint kumsitho weeNtshatsheli ze-Premier Boxing.
I Benavídez oneminyaka engama-24 ubudala (25-0, 22 KOs) ubonise arsenal epheleleyo yamanqindi ukuthumela iinzame zobugorha ukusuka Davis (16-3-1, 6 KOs), owangenela ukulwa WBC's No. 1 super. i-middleweight contender kwisaziso seeveki nje ezimbini. UDavis wabonisa intliziyo engakholelekiyo kunye nesibindi, ethatha izixa ezigqithisileyo zezohlwayo kuwo wonke umlo kodwa akazange abethe i-canvas kwaye kungakhathaliseki ukuba zingaphi iinqindi awayebethwa ngazo, wayewubuyisela umlilo.
Umqeqeshi kaDavis, uStephen “Breadman” Edwards, wasiphelisa isohlwayo ngo-:48 kumjikelo wesixhenxe xa ephosa itawuli.
“Ibingumdlalo omhle kakhulu lowo ekugqibeleni kwam,” uBenavídez uxelele uJim Grey weXESHA LOKUBONISA emva kokumiswa. “Isibindi esikhulu nguKyrone. Inkulu intlonipho kuye nakwiqela lakhe. Unzima umfo. Ndiphume apha ukuza kunika abalandeli umlo omhle kwaye sobabini sikushiye ngaphandle eringini.”
Ngomhla we-13 kaNovemba ngokubizwa ngokuba "nguSuku lukaDavid Benavídez" ePhoenix, isihlwele esinesiphithiphithi kwiZiko leeFootprint sabongoza iqhawe labo ledolophu ngalo lonke ixesha. I-Benavídez ifike kwi-137 ye-258 ye-punches yamandla (i-51 ekhulwini) kwaye ijolise kumzimba kaDavis kulo lonke ukulwa. Wadibanisa kwi-50 ye-punches yomzimba, i-45 yayo yayiyi-punch yamandla.
“Kwakunzima kodwa into emalunga nam kukuba ndinemeko eninzi kangangokuba ndiza kuqhubeka de ayeke,” uqhube watsho uBenavídez. “Nantso ke into eyenzekayo ekugqibeleni. Badla ngokunikezela. Ndiyazi ukuba andinawo amandla okukqongqotha ngenqindi enye kodwa ndiza kube ndikulungele ukukufumana umjikelo ngamnye.”
UDavis oneminyaka engama-27 ubudala udlale indima yakhe kumsitho ophambili owawukholisa abantu kwaye wafumana intlonipho kunye nokunconywa ngumntu wonke obukeleyo.
“Ndiphoxekile kancinci,” watsho uDavis. “Akwaba bendikwazile ukuyikhupha impumelelo. Andikuthandi ukulahlekelwa. Ndingene ngesaziso seeveki ezimbini. Iintloni ku (Jose) Uzcategui ngokuba kwi-steroids. Kwafuneka ndingene ngethutyana nje elingephi kodwa ndalwa njengegorha. Ndiphila iphupha lam. Ndiyakuthanda ukuphuma apha kwaye ndibeke umboniso omkhulu. Umlo usegazini lam. Ndikhuliswe ngolu hlobo.”
Ngomdlalo ongabethwanga wokuqalisa umsebenzi wakhe usasebenza, uBenavídez, owayesakuba yintshatsheli yamaxesha amabini kudidi oluphakathi, ngoku ujonge kumlo omkhulu okwi-168 yeeponti.
“Wonke umntu ufuna ukundibona ndichasene noCanelo, akunjalo? Andikhathali nokuba yintoni na uvavanyo lwakhe lomlo wam kodwa bahlala bebeka aba bakhuphisi phambi kwam. Umlo wam wokugqibela ibiyiWBC Title Eliminator yiyo lonto ndilapha ndibambe amabhanti am. Kufuneka bandinike ithuba. Ndizakudlula nabani na. Nabani na abafuna ndidlule kuye. Ukuba (uJermall) uCharlo uyayifuna, unokuyifumana naye. Kodwa akafuni ukungena eringini nam.”
Kwi-co-main event, uJose Benavídez Jr. (27-1-1, 18 KOs), umkhuluwa kaDavide ngeminyaka emihlanu, wabuyela emva kweenyanga ze-37 zokuyeka ukulwa no-Emanuel Torres (17-3-1, 5 KOs) kutsalo oluninzi. Kumlo onokuthi uhambe nangayiphi na indlela, abagwebi bafumene ukhuphiswano lwama-96-94 kuBenavídez kunye ne-95-95 kabini.
Andazi ukuba ndiwufumene njani umzobo,” utshilo u-Benavídez ekhwaza kakhulu kwisihlwele sasekhaya esifuna kakhulu ukubona uBenavidez ephumelela. “Singayibuyisela emva. Ndambetha. Bendicinga ndimbethe. Waqhubeka ebaleka. Wayengafuni ukuhlala epokothweni. Andinakwenza nto ngezigqibo zabagwebi. Ndaziva ndonwabile. Ebemane ebamba. Ndandimbetha qho. Ndingenza ntoni?"
Kwisenzo sokuqala sikaBenavídez ukusukela oko wawisa isihloko se-147-ponti kuTerence Crawford ngo-Okthobha ka-2018, yayilidabi lamandla akhe kunye nomsebenzi womzimba ngokuchasene nomsebenzi kaTorres kunye nokuchaneka. UBenavídez uchithe uninzi lomlo ezama ukuhamba phantsi eTorres. Wafumana iingqindi zomzimba ezingama-64 kuyo yonke imijikelo ye-10, kodwa wayechaphazeleka ekubetheni ngenqindi kaTorres kunye nokuchaneka entloko. UTorres wayengoyena mlo wayexakeke kakhulu, waphosa iingqindi ezingama-612 ku-Benavídez's 375. Nangona kunjalo, amanqindi okugqibela ahlatyiweyo ayekufutshane neTorres eyafika eyi-135 kunye ne-Benavídez eyafika kwi-122.
Umjikelo we-10 nowokugqibela ubunyanzelekile kwisiphumo somlo. Ukungena kumjikelo, uTorres ulandele emva kwabo bobathathu amakhadi eejaji. Ukhuphe i-Benavídez ngo-13-4 kwii-punch ezingama-23 ngaphezulu, waphumelela umjikelo kuwo onke amanqaku amanqaku ukuze ajike umlo ukusuka ekuphulukaneni nesigqibo esinye ukuya kutsalo oluninzi.
“Ungava kwisihlwele. Ndizive ndiwuphumelele umlo,” utshilo uTorres waseArgentina. “Njengondwendwe, ndize apha kwiyadi yakhe engasemva kwaye basamtsala. Khawucinge ukuba oku bekuya kuba seBuenos Aires. Ngokuqinisekileyo ndiyawufuna umdlalo. Masibone ukuba iqela lam labaphathi lithini kodwa ngokuqinisekileyo ndiyakufuna.”
I-telecast yavula ngokuphinda-phinda okukhethekileyo kokuphumelela kokwenza imbali kaCanelo Álvarez kuCaleb Plant kwaye ngokukhawuleza emva kwe-SHOWTIME TV, ALL ACCESS: CANELO VS. I-PLANT EPILOGUE yaboniswa okokuqala kwinethiwekhi.
Umabonakude wangoMgqibelo, IXESHA LOKUBONISA INKQUBO YEBHEKISI iya kuphinda idlale ngeCawe, Novemba 14 ngo-9 am ET/PT ngo-SHOWTIME nangoLwesibini, Novemba 16 ngo-10 pm ET/PT kwi-SHOWTIME EXTREME.
I-Munguia ibonisa uRosado kwimfazwe kunye nomlo wonyaka
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	Alejandro Reyes, UAlexis Rocha, Ngaba nguMucino, UAsa Stevens, D'Mitrus Ballard, UFeliks vazquez, UGabriel Rosado, Jacky Calvo, UJaime Munguía, UJeovanis Barraza, UJohn Moralde, UJorge Chavez, Munguia vs. Rosado, Osmel Mayorga, UPaul Valenzuela Omnci, UWilliam Zepeda	0
Isiphumo sikaJaime Munguia vs. Gabriel Rosado
Anaheim kaThixo Honda Centre, California, USA 13/11/21
Isihloko seWBO Intercontinental Middleweight
Ibhongo likaTijuana, uJaime Munguia (38-0, 30 KOs), waba nempumelelo echulumancisayo kwigorha elibukhali “uKumkani” uGabriel Rosado (26-14-1, 15 KOs) egcina ubunganga bakhe obungoyiswayo kunye neWBO Inter-Continental Middleweight. Isihloko sehlabathi kwi-Anaheim's Honda Centre. Umdlali ocetyiweyo okwimijikelo elishumi elinesibini kudidi oluphakathi 'Umlo woNyaka' wongeze elinye idabi elibalulekileyo kukhuphiswano lwamanqindi lwaseMexico vs. Puerto Rico. Isiganeko esaqala ngokucotha njengoko abalwi bahlengahlengisa omnye komnye batshintsha isantya kumjikelo wesine njengoko uRosado waqalisa ukuhlasela okwammangalisa uMunguia. Nangona kunjalo, uMunguia akazange ahlehle, endaweni yoko wabuya, njengoko bobabini abalwi batshintshana ngokuhlalisa amandla emzimbeni.
Isenzo siqhubekile kumjikelo wesithandathu kunye neMunguia ebamba uRosado ngamalungelo athe ngqo entloko, kodwa oko akuzange kumise uRosado, waqhubela phambili ukubamba i-Munguia ngamagwegwe afanelekileyo. Ngesinye isihlandlo kumjikelo wesixhenxe uRosado egged on Munguia ukuba ambethe emva kokuba bobabini badityaniswa kwaye behla kwi-canvas. Imijikelo yobuntshatsheli yayinesihlwele esichwayitisayo ngeenyawo njengoko Munguia eqalisa ukuhlasela eRosado, embamba rhoqo ngamalungelo akhe athe ngqo ngokubonakalayo engcangcazela uRosado, kodwa umlo wasePuerto Rican waqhubeka etyhalela phambili. Njengoko umlo wawusiya kumanqaku amanqaku, abagwebi bagweba ngokuchasene neMunguia ngesigqibo esivumelanayo ngamanqaku e-118-110, 119-109, kunye ne-117-111.
“Ndandingacingi ukuba uRosado angahlala ixesha elide kangako eringini,” watsho uJaime Munguia. “Wayenyamezela kakhulu, kodwa ndiyacinga ukuba ndibonakalise kumjikelo wesithoba kwaye bendiwongamele umlo. Ndiyavuya kuba sikwazile ukuthatha impumelelo namhlanje. Ngoku, ndifuna ukubuyela kwindawo yokuzivocavoca, ndisebenze kwizinto ezimbalwa kwaye ndilwele umgqatswa wehlabathi okanye ubuntshatsheli behlabathi kwi-160. "
“Ndicinga ukuba ndenze konke ebendinako ukuphumelela, amakhadi amanqaku abubuvuvu. Ndiwuphumelele umlo,” utshilo uGabriel Rosado
"Ndicinga ukuba uMungiia ubonise amandla amaninzi kunye nentliziyo eninzi namhlanje. I-Rosado ibonakalisa isibindi esikhulu, bayishiya yonke into emsesaneni. Ndifuna ukubabulela bobabini ngokusinika uMlo woNyaka,” utshilo uOscar de La Hoya.
Bobabini abalwi basinike umboniso namhlanje,” utshilo u-Erik Morales. “I-Rosado yayinzima kakhulu, yomelele. Wasothusa sonke. Yayingumboniso omhle ovela kuMunguia. Ndinebhongo kakhulu ngaye, ubonisile, ubugorha namandla eringini ngobu busuku.”
“Ndicinga ukuba omabini amajoni ayekhaliphile, eqinile,” utshilo uFreddie Roach. “Ndicinga ukuba amanqaku ebefanele ukuba kufutshane kunokuba ebenjalo, kodwa uyazi, ngamanqindi. Kodwa lilonke, umlo onika umdla kakhulu, ndicinga ukuba mhlawumbi 'umlo woNyaka.'”
U-Alexis “Lex” Rocha kaSanta Ana (18-1, 12KOs) uqaqambe kumlo we-welterweight onemijikelo elishumi noJeovanis Barraza (10-22, 2KOs) waseBarranquilla, eColombia. Le nzalelwane yeNqila yaseOrange, yongamele imijikelo yokuqala, imenza buhlungu uBarraza. Engcangcazela ezinyaweni zakhe, uBarraza walungisa isitayile sakhe kwaye waqala ukubeka umgama phakathi kwakhe noRocha. URocha wamsukela kakhulu njengoko iNqila yaseOrange yayilila yayimvuyisa. Umjikelo wesibhozo wazisa isihlwele ezinyaweni zaso kwaye bobabini uRocha noBarraza batshintshiselana ngezithonga, elowo engavumelani omnye komnye. Kumjikelo wesithoba, uBarraza wayebonakala ediniwe, into engazange ibonwe nguRocha. URocha wathatha ithuba lakhe wamoyisa uBarraza ngeentambo de usompempe wagqiba kwelokuba uBarraza wonele.
“Ndiwulungiselele lo mlo kwaye ngobu busuku ndibonisile ukuba ndililungele igama elikhulu ngo-2022,” utshilo u-Alexis Rocha. “UBarraza wayengumdlalo, weza kulwa, kodwa ndandisazi ukuba ndinamandla okulawula kwaye kufuneka ndimisele impumelelo. Zange ndimbone kunzima, kodwa ndandiqonda ukuba mandinyamezele ndingangxami, kwaye ndiyabulela ngoku siphumelele. Ndifuna ukuhlala ndixakekile ngo-2022 kwaye mhlawumbi ndifumane iHooker, yaxelwa kum, kwaye ndicinga ukuba iya kuba ngumlo olungileyo.
U-D'Mitrus Ballard (21-0-1, 11KOs) wase-Temple Hill, eMaryland, wenza ukubuyisela kwakhe okuhle kwindandatho kumlo we-10-roundweight kunye no-Paul Valenzuela waseMexico, oMncinci (26-10, 17KOs). Umlo wahamba umgama kwaye uBallard kunye neVenezuela, Omnci. Ekugqibeleni, uBallard wathatha uloyiso ngesigqibo esivumelanayo ngamanqaku angama-98-92 kuzo zontathu iijaji.
“Ukubuya emva kweminyaka emibini ndingalwa, bekunzima, kodwa ndiyavuya ukuba le mpumelelo ndiyifumene phantsi kwebhanti lam,” utshilo uD’Mitrus Ballard. “Ndandivakalelwa kukuba uValenzuela, Omnci. wayeyimfazwe engafanelekanga, kwafuneka ndilungelelanise nesimbo sakhe, kodwa siwugqibile umsebenzi kwaye kufuneka sibuyele kwindawo yokuzivocavoca, siqhubeke nokusebenza, kwaye sibengcono.”
Inkwenkwezi yaseMexico engoyiswanga, ekhaphukhaphu enyukayo, uWilliam Zepeda (24-0, 22KOs), ukhusele itayitile yakhe yeWBA Continental America's Lightweight ngokuchasene noJohn Moralde waseMiami (24-5, 13KOs) kumjikelo we-10. UZepeda wayezithembile kakhulu eringini, elawula umdlalo kwangethuba emlo. Kumjikelo wesine, uZepeda wamfaka ekoneni uMoralde kwangethuba, waqonda ukuba uphelelwa ngamandla, wamongamela ngeenqindi de kwangena usompempe wawumisa umlo, nto leyo eyanika uZepeda uloyiso lokunkqonkqoza.
“Ndaziva ndomelele kwaye ndiwulungele lo mlo,” utshilo uWilliam Zepeda. “Bendinenkampu yoqeqesho elungileyo kwaye bendifuna ukubonisa wonke umsebenzi wam onzima namhlanje. Emva koku siza kubuyela ejimini, sihlale sisempilweni kwaye silungele ithuba elilandelayo.”
Intloko yeGolden Boy Fight Night inxalenye yobusuku, ihlala kuFacebook Watch, Arely Mucino (30-3-2, 10 KOs) yaseMonterey, Mexico wajongana ngokuchasene noJacky Calvo (14-7-2, 1KO) waseMexico City e. i-10-round female flyweight idabi. Umlo onika umdla umiselwe ngobusuku njengoko bobabini abalweli behambe umgama kwidabi elisondeleyo elabhengeza uArely njengophumeleleyo ngesigqibo esinye.
Kumjikelo wesithathu ebusuku, poplar prospect, Alejandro Reyes (5-0, 4KOs) of Los Angeles inxaxheba kumlo 4-round super lightweight nxamnye Osmel Mayorga (2-3, 1KO) of Miami, Fl. UReyes, ubonise amandla akhe okubethelela ngokubetha uMayorga kumjikelo wesibini, esongeza enye irekhodi kwirekhodi lakhe lokunkqonkqoza.
Ithemba elikhulayo laseSan Diego, uJorge Chavez (1-0, 1 KO), wenza i-pro-debut yakhe kwimpumelelo yobugcisa bokunkqonkqoza kuGilberto Aguilar waseMexico City (0-4). Umlo owawucwangciselwe imijikelo emi-4 ye-super featherweight uye wanqunyanyiswa ngusompempe kumjikelo wesithathu njengoko u-Aguilar wayesokola ukuhlala ebambelele entanjeni.
Evula imibhiyozo yobusuku, u-Asa Stevens (2-0) waseWaianae, HI wamoyisa uFelix Vazquez (0-1) owayesenza umdlalo wakhe wokuqala wobuchwephesha, ngomjikelo wokuqala wokunkqonkqoza. Usompempe wawumisa umlo ngo-1:02 amanqaku kumlo owawucwangciselwe imijikelo emi-4 kudidi lwe-super bantam.